Sidee About Mashaariicda Metro ee dalka Turkiga | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaMarka Mashaariicda Wadohoose Xaaladda dalka Turkiga
05 / 12 / 2019 16 Bursa, 33 Mersin, 34 Istanbul, 41 Kocaeli, 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, Warqad Hordhac ah
Maxaa ku saabsan mashruuca mara dalka Turkiga ee
Ka dib tareenka Istanbul, oo loo keenay ajandaha dhibaatada kheyraadka iyo burburka, indhaha ayaa loo rogay mashaariicaha metrooga socda ee dalka oo dhan. In kasta oo ay dawladda hoose ee 'CHP Mersin' ay raadineysay deyn loogu talagalay mitirka, wasaaraddu waxay la wareegtay dhismaha metrooga magaalooyinka Bursa iyo Kocaeli. 2004 sanadka bilawga sanadka 2015 ee Konya ee loogu talagalay qormada koowaad waxaa la filayaa inuu ku dhufto qodobka ugu horeeya dhowaan.
SözcüSida warku sheegayo; Laba sano ka hor, dhismaha metro-ka ee magaalada Istanbul waxaa loo joojiyey lacag la'aan. Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu ayaa shaqadii dib u bilaabay isagoo amaahda dibedda ka hela. Imamoglu, "nasiib xumo, bangiyada dowladdu albaabada ayeey naga xirnaayeen" ka dib markii lagu dhawaaqay degmooyinka CHP inay bilaabeen inay ka wada hadlaan isha carqalada. Waxaan sidoo kale baranay qaar ka mid ah shaqooyinka metro-ka magaalooyinka waaweyn ee ka baxsan Istanbul. Si kastaba ha noqotee, waxaan la kulannay natiijooyin cajiib ah. Magaalooyinka sida Kocaeli, Bursa iyo Konya, Wasaaradda waxay qabataa howlaha metro-ka iyo Mersin, oo ay maamusho CHP sida Istanbul oo kale, waxaa soo food saartay xiisad dhaqaale.
KOCAELİ: WASIIRADA KA DAMBEEYA METRO
Aasaaskii Gebze-Darıca Subway Industrial Subway Subway ee Kocaeli waxaa la dhigay 20 Oktoobar 2018. 5 bilyan ginni oo ah qiimaha mashruucan oo keliya oo ay leedahay Dawladda Hoose ee AKP ee Magaaladda Kocaeli ayaa fulisay. Si kastaba ha noqotee, horumarka laga filaayey mashruucu ma lagu helin dhex-galka sanadka 1. 31 doorashadii Maarso, gudoomiyaha AKP Tahir Büyükakın ayaa culeyska ku wareejiyay degmada Ankara. 18 Oktoobar Borotokool ayaa la saxeexay inta u dhaxaysa Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha iyo Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli ee 2019. Duqa Magaalada Büyükakın wuxuu yiri, le Mashruucan aan ku wareejiney Wasaaradda Gaadiidka, waxaan tixgalin doonaa kheyraadka ay ku leedahay Degmadeena Magaalooyinka mashruucyo kale oo badan. ”
Kahor doorashadii 31 ee Maarso, Kocaeli Magaalo-weynaha Magaalo-Weynaha ayaa dhigay astaamaha joogsiga metro ee gobolka, laakiin calaamadahan waa la saaray doorashadii kadib.
BURSA: WASIIRKA GAADIIDKA
Khadka Shaqaalaha ee Bursaray si loo gaaro mashruuca Isbitaalka Magaalada waxaa fulin doona Wasaaradda Gadiidka. Gaadiidka cisbitaalka magaalada, khadka mitirka Emek waxaa lagu dheereyn doonaa qiyaastii 5,5 kiiloomitir. Mashruuca ayaa la dejin doonaa bilowga 2020. Dhismaha khadka ayaa la filayaa inuu qaato 1,5-2 sano. Waxaa la bartay in tirada cad ee qarashka ay ku socoto daraasadaha suurta galnimada ay wali sii deyn.
MERSİN: XUQUUQUL AYUU KU BAAHAN YAHAY
Duqa Degmooyinka Magaalada Mersin Vahap Seçer ayaa sheegay in ay garaaci doonaan qadka 2020 ee Mashruuca Metro kaas oo ah mashruuc maalgashi oo muhiim u ah Mersin.
Waxaa la bartay in khadka mitirka dhererkiisu uu ahaan doono kiiloo mitir 28.6 kilomitir, kaas oo loo qorsheyn doono qaab 7 nus kiiloo mitir kiiloo mitir ka sareeya metro dhulka ah, 13.4 kiiloomitir kilomitir dhulka hoostiisa ah iyo 7.7 kiiloo mitir sidii wadada laamiga ah.
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay kaloo qorsheynaysaa wado kale oo taraam ilaa Isbitaalka Jaamacada iyo Wadada Jaamacada.
Duqa Magaalada Mersin ee Magaalo Weynta Vahap Seçer ayaa sheegay in raadinta amaahda loogu talagalay howlaha metro iyo taraamyada laga bilaabi doono dibada. Duqa Seçer wuxuu yiri, "Aan ka helno amaahda halkaas, shirkada ha ku sameyso dhismaha, waxaan rabnaa inaan siinno maalgelinta iyo dhismaha meheradda meel".
KONYA: LA FUDUD IN 2015 COMING SOON!
Tahir Akyürek, oo loo doortay Duqa AKP ee doorashadii maxalliga ahayd ee 2004 ee Konya, ayaa ballan qaaday Metro. 2015, Ra'iisul Wasaare Ahmet Davutoğlu wuxuu soo bandhigay mashruuca metro-ka. Qandaraaska mashruuca metrooga waxaa la qabtay bishii Sebtember ee la soo dhaafay. 1 bilyan 196 million kun 923 Euro, 29 senti ayaa ku guuleystey qandaraaskii ay la galeen Shiinaha CMC-Taşyapı Dhiska iskaashiga.
Ugaur Ibrahim Altay, Duqa Magaalada Konya ee Magaalada Caasimadda ah, ayaa shaaca ka qaaday in shaqada mashruuca metro-ka oo ay maal galisay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha ay dhowaan bilaaban doonto.
Alstom Transport ayaa diiradda lagu saaray mashaariicda tareen-xawaaraha sare ee Turkey
Qiimaha System Rail Light Qaar ka mid ah dalka Turkiga
macaamiisha Rail booqday shirkad RUF ee Turkey
Bombardier Gaadiidka 25 dalka Turkiga. Wuxuu dabaaldegaa sanadkiisa
Bombardier sugaya curdan tareenka ee Turkey ah
Stäubli u dabaal furitaanka xafiisyo iyo dhirta cusub ee Turkey
Gathering ugu weyn ee aalado dalka Turkiga oo bilawday 1 October!
Deynta madaarka ee magaalada Adana ee caasimadda ayaa ka baxaysa xaalad adag
Metro Mashaariicda Turkiga